Iimpawu zamahlathi kunye nokuvumelanisa ngeGoogle Maps - 5 Novedades de Microstation V8i - Geofumadas
amafu Point kunye ungqamaniso ne Google Maps - 5 New Microstation V8i
NgoJuni, 2014 ezintsha, Microstation-Bentley
Ukukwazi ukunxibelelana Google Maps and Google Earth kunye nolawulo lwe data ukusuka yabavavanyi, ezinye ezilindelekileyo engxamisekileyo nayiphi na inkqubo GIS - CAD. Kwezi izinto Akukho mntu uthandabuzayo ukuba software free seyiphambili ngokukhawuleza ngaphezu software lobunikazi.
Okwangoku ndiza kuhlaziya ukuhlaziywa kwesibili kwe-Select Series 3 ye-Microstation V8i (8.11.09.107), kwaye kulungile ukwazi ukuba kukho ukuhambela phambili. Makhe sibone ezinye iindaba ezize zombini kwii-3 Series kunye ne-2 Series:
1. Ukuvumelanisa neGoogle Maps
Kwinqaku elidlulileyo ndalithetha ngalo ukuvumelanisa neGoogle Earth. Kule meko, zongeze enye imisebenzi evumela ukuba umboniso wangoku wefayili ye-dgn / dwg ivumelaniswe neGoogle Maps, kwaye unokukhetha kwakhona inqanaba lomsebenzi.
Oku kwenziwa Izixhobo> Geographic> Vula indawo kwiGoogle Maps
Ngaphambi kokuchofoza kwesikrini ifestile esantantayo ibonakala ivumela ukuba sikhethe izinga lokuhamba, eliya ku-1 ukuya kwi-23.
Kwakhona kunokwenzeka ukhethe umbono, onokuthi: imephu, isitrato okanye izithuthi.
Kwaye ungakhetha kwakhona isitayela: imephu, hybrid, relief or satellite.
Ngenxa yoko, inkqubo ivula kwisiphequluli se-Intanethi, kunye nokuthunyelwa okukhethiweyo.
Akulungile, kodwa kunzima ukuqonda ukuba kutheni akulula njengokuba wongezelela njengoluhlu olutsha ... kuba nje ndiyazi, yinto elandelayo abaya kuyenza kwinguqu elandelayo.
2. Iimbono ezigcinwe
Yinto yokusebenza njengenye enye inkqubo ye-CAD / GIS eyenziwe ixesha elide, ewenza ukuba kube lula ukugcina ukufikelela ngqo kwindawo ethile yokuthunyelwa. Ngommahluko omkhulu ukuba i-Bentley isebenzisa ukhetho loqwalaselo lwembono, apho kunokwenzeka khona kule ntlupheko ukuchaza ukuba yeyiphi iindawo eza kusebenza, ziphi na izinto ezibonakalayo, imbono yokubona, phakathi kwezinye izinto.
Kunokwenzeka ukuba uchaze ukuba zeziphi iifayile ezibizwa ngokuba yi-reference, kunye nokubonakala kwimeko.
3. Inkxaso ye-Realdwg ye-AutoCAD 2013
Siyazi ukuba kwi-2013 AutoDesk yatshintshile ifayili, eya kuba yenzeke kwi-AutoCAD 2014 kunye ne-AutoCAD 2015.
I-Microstation Khetha i-Series 3 ingavula, ihlele kwaye igcine ezi ntlobo zeefayile ngokuzenzekelayo.
Kule, ewe ukuba isivumelwano kunye ne-AutoDesk siphumelele kakhulu, ukuba yonke i-OpenSource ayikwazanga ukugcina. Ayikho ukungenisa, kungaphantsi kokuhlelwa ngokuhle.
4. Support Point Cloud.
Lo ngumsebenzi owaqala ngeCandelo loChungechunge lwe2. Nangona kwiphepha elitsha longeze ukuphucula ukusetyenziswa.
Amaphuzu angaphathwa kwiifom:
TerraScan bin, CL3 Topcon, iFaro FLS, LiDAR LAS, Leica PTG - nqaku - PTX, Riegl 3DD - RXP - RSP, ASCII xyz - txt, Optech IXF, ASTM e57 kwaye ke, Izixhobo I-POD, iteknoloji eyayifumene nayo emva kokufunyanwa kwayo kwiminyaka yamuva.
5. Inkxaso yokuphuhliswa kwimihlaba efanelekileyo.
Ukwenziwa komncedisi we-Server yinto evelayo, kodwa ikhule ngokusebenza njengoko ngoku sinolawulo olubhetele kwiinkcukacha zokuthembela kunye nentambo ebanzi.
Nale, kunokwenzeka ukuba iiseva ezininzi ukwabelana iinkqubo, udluliselo nasekusasazeni iiseshoni umthamo evulekileyo ngaphandle kokuba ukuba ngokwasemzimbeni 10 kwiminyaka eyadlulayo kwabanye abancedisi. Ngoko ke, iinkonzo ezifana ukwenza GeoWeb Umshicileli okanye Server Geospatial ube ilifu abancedisi ngaphandle koloyiko esithe befumile okanye imfuneko kuphela ngokuthi sithwalisa iinkqubo ezibandakanya yangaphambili.
Ngokubanzi, siyifumana umdla olutsha umdlalo we-Microstation V8i kwisiqendu sesithathu. Nangona ezinye iinkalo zeengxelo ze-geospatial zihlala zihamba ngokukhawuleza kunokuba amandla e-OpenSource, kwinqanaba lezicelo ezicacileyo kwi-engineering yobunjineli bezobunjineli kunye nezoBunjineli boLuntu, iyaqhubeka ibonakaliso obalulekileyo kwimibono eqhubekayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuba ngumveleli ngumntu obomi bonke.
Post Next XVI Congress of Geographic Information TechnologiesOkulandelayo "